पहेँलो गुलाफको एउटा पत्र- विविधा - कान्तिपुर समाचार
पहेँलो गुलाफको एउटा पत्र
पुस ८, २०७४ देवेन्द्र भट्टराई, देवेन्द्र भट्टराई
काठमाडौँ — ‘गुलाफ फुलिसकेछ । कति राम्रो, दुइटा मात्र फुलेछ । कहिलेदेखि पर्खेको मैले यो पहेंँलो गुलाफलाई । अझ अरू त फुलेकै छैनन् । यी नफक्रेका कोपिलालाई कति आनन्द छ अहिले, एउटा प्रगाढ निद्रा, अनन्त शान्ति । यी फक्रेका फूल कठै ! फेरि झुसिलकिरा लागेछ । मेरो कामै झुसिलकिरा टिपेर फ्याँक्ने भइसक्यो ।’
‘गुलाफ फुलिसकेछ । कति राम्रो, दुइटा मात्र फुलेछ । कहिलेदेखि पर्खेको मैले यो पहेंँलो गुलाफलाई । अझ अरू त फुलेकै छैनन् । यी नफक्रेका कोपिलालाई कति आनन्द छ अहिले, एउटा प्रगाढ निद्रा, अनन्त शान्ति । यी फक्रेका फूल कठै ! फेरि झुसिलकिरालागेछ । मेरो कामै झुसिलकिरा टिपेर फ्याँक्ने भइसक्यो ।’
नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पाइला चाल्दै गर्दा १८ वर्षे उमेरमा प्रेमा शाहले लेखेकी थिइन्, एउटा उम्दा कथा— पहेंँलो गुलाफ । एउटी नारीको मानसिक उतार–चढाव र सँगै उभिएको पुरुषको यौन अतृप्तिको मनोविज्ञानलाई झुसिलकिरा लागेर पत्रपत्र खस्दै गरेको पहेंँलो गुलाफको फूलसँग तुलना गरिएको त्यस्तो कथानक आफैंमा अनौठो थियो । २०२० सालतिर भर्खरै क्याम्पस पढ्दै गरेकी प्रेमालाई सिग्मन्ड फ्रायड वा फ्राइडियन शैली त्यति पत्तो भैसकेको थिएन । उनी भन्थिन्, ‘म त हाम्रै गोठाले, भिक्षु, विजय मल्ल वा बीपी कोइरालाका कथा मन दिएर पढ्ने गर्थेँ । बाहिरी कथावस्तु वा शैली पनि त्यस्तो थाहा थिएन । धेरै अर्थमा एउटा पुरुष पात्रको दृष्टिकोण र विम्ब–चेतना फूलमा झुम्मिने झुसिलकिरा जस्तै भन्ने ठानेर, त्यो अर्थमा पहेँलो गुलाफ लेखेकी थिएँ । कथा निकै चल्यो, उपल्लो कोटीको प्रयोग भनियो । मैले त्यस्तो प्रयोग गरौंला अथवा ‘कुछ होला’ भनेर लेखेको जस्तो लाग्दैन ।’
प्रोफाइल लेखनका क्रममा भेटघाट हँुदा कथाकार प्रेमा शाह जे भन्ने गर्थिन्, त्यो सुनिरहुँ जस्तो लाग्थ्यो । पछिल्लो समय झन्डै एक दशकयता अमेरिकावासी बनेकी प्रेमाको यो साता निधन भएको खबर आएपछि मात्रै ती हक्की र प्रयोगपरक लेखिकाको एकैसाथ स्मरण भैरहेको छ । वीरगन्जको श्रीपुरमा २००२ सालमा जन्मिएकी गिरिराजलक्ष्मी शाह कालान्तरमा नेपाली साहित्य जगतमा प्रेमा शाह बनेर कसरी उभिइन् भन्ने कथा आफैंमा रोचक छ ।
वीरगन्जमा जन्मिए पनि बाल्यकालीन र पछिको धेरै समय काठमाडौंमा मावली परिवारमा बिताएकी प्रेमा शाह आफ्नो स्वभाव र पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण पनि धेरैजसो अन्तरमुखी झैं रहिन् । नेपाली समाज र त्यसमाथि लेखन, प्रयोग र शैलीमा ‘खुलापन’ खोज्ने नारी हस्ताक्षर भएपछि अरू के चाहियो ? एक पटक चेतना र विद्रोहको संकेतमा ‘आऊ, मलाई सम्भोग गर’ भन्दै कविता वाचन गरेकै भरमा उनलाई भिन्न दृष्टिकोणले हेर्नेहरू पनि निकैजना निस्किएका रहेछन् । अक्सर आफ्नो लेखाइ र अरूको बुझाइको तारतम्य नमिल्ने गरेकोमा प्रेमा भन्थिन्, ‘यहाँ धेरैजसो व्याख्याभन्दा बढी अपव्याख्या हुन्छ । मेरो स्वभाव र समस्या के छ भने म व्याख्या गर्दै हिंँड्न रुचाउन्न ।’
‘पहेंँलो गुलाफ’कै कुरा गर्दा यसलाई नारीवादी चेतनादेखि लेखाइको ‘एक्टिभिजम’सम्म भनिएको प्रेमा सम्झिरहेकी हुन्थिन् । हरेक लेखाइ, पात्र र चरित्रले लेखक उभिएको समयलाई समाउने गरेको हुन्छ भन्ने यथार्थमा उनी सहमत थिइन् । ‘पहेंँलो गुलाफ’ विचलित र विक्षिप्त एउटी नारीको मात्रै होइन, अब पुरुषको पनि प्रतीक बनिसकेको उनको परिमार्जित धारणा थियो । ‘अब त के नारी, के पुरुष भन्ने भैसक्यो,’ प्रेमाले एउटा लिखित प्रश्नोत्तरको जवाफमा भनेकी छन्, ‘अहिले प्रेमको परिभाषा बदलिएको छ, मान्छे–मान्छेबीच सम्बन्धको पुल नै छैन । सतही छ धेरै कुरा, सम्भँmदा पनि दिक्कै लाग्ने ।’
वीरगन्जको एउटै पृष्ठभूमि र लेखनशैलीमा पनि नवीनता रुचाउने मिल्दो स्वभाव भएकाले प्रेमाले आदरपूर्वक सबैभन्दा धेरै सम्झने लेखक ध्रुवचन्द्र गौतम थिए । गौतमसँग २०२१ साल यताको प्रेमाको साहित्यिक संगत सधैंभर रह्यो । त्यही संगत र साहचर्यले २०३१ सालमा प्रेमा सहितका १० लेखक मिलेर नेपाली साहित्यमा एउटा अनौठो प्रयोगपरक संयुक्त लेखन आयो, ‘आकाश विभाजित छ’ नामको उपन्यासका रूपमा । त्यो प्रयोगमा गौतम र शाहसहित परशु प्रधान, ध्रुव सापकोटा, केदार अमात्य, दौलतविक्रम विष्ट, मञ्जु काँचुली, पुष्कर लोहनी, शैलेन्द्र साकार, शंकर कोइरालासमेत जोडिएका थिए । यो प्रयोगमा पारिजात र शंकर लामिछाने पनि जोडिने भनेर केही समय लेखक समूहले पर्खिएका थिए, तर पछि त्यत्तिकै उपन्यास तुरियो । ‘नारी हस्ताक्षरमा पारिजातपछि सबैभन्दा उम्दा र चर्चाका हिसाबले अग्रणी थिइन् प्रेमा,’ उपन्यासकार ध्रुवचन्द्र गौतम सम्झन्छन्, ‘कथा लेखनमा प्रेमाले भित्र्याएको यौन मनोविज्ञानको सूक्ष्म शैलीको म प्रशंसक हुँ ।’ समयान्तरमा अभिनेत्री जल शाहकी आमा भनेर चिनिएकी प्रेमाले छोरीलाई हुर्काउन र सही मार्गदर्शन दिलाउन गरेको त्याग–समर्पण साँच्चै उल्लेख्य रहेको गौतमको सम्झना छ ।
‘तपाईका कथामा फिल्म बनाएर यसलाई खेल्न भन्नुपर्‍यो’ भन्दै छोरी जललाई लिएर प्रेमा आफूलाई भेट्न आउने गरेको बितेको समय सम्झिरहेका छन्, गौतम । २०१६ सालमा पहिलोपटक ‘शारदा’ पत्रिकामा ‘प्रतिक्रिया’ शीर्षक कथा लेखेर साहित्यिक जगतमा आएकी प्रेमाका कथा संग्रहहरू ‘पहेंँलो गुलाफ’ र ‘विषयान्तर’ तथा उपन्यास ‘मम्मी’ प्रकाशित छन् । समीक्षकहरूले प्रेमाको लेखनमा परम्परागत शैलीभन्दा एकदमै भिन्न खुराक पाइने भन्दै ‘पहेंँलो गुलाफ’लाई यस्तै ‘अकथा’ मानेका छन् । यो अकथाभित्र डायरी लेख्ने क्रममा उब्जिएको एकालाप र आत्मालाप छ । यो भन्दा अलग विधामा प्रेमाका झन्डै एक दर्जन बालकथा र उपन्यास पनि प्रकाशित छन्, जुन बजारमा अप्राप्य छन् ।
आफ्नो जन्मथलो वीरगन्जमा नारायणी वाङमय प्रतिष्ठान स्थापना गराउनेदेखि आञ्चलिक साहित्यको श्रीवृद्धिमा उनी खुलेरै लागिपरेकी थिइन् । एउटा लेखकका निम्ति आफ्नै जीवनको भोगाइ पनि लेखन स्रोत र ऊर्जा बन्न सक्ने ‘आम बुझाइ’मा प्रेमा सहमत थिइनन् । उनी भन्थिन्, ‘मैले आफ्नो होइन, अरूका दु:ख, संघर्ष र संवेदनामाथि कलम चलाएकी छु ।’
‘कल्पनाशील मान्छे कि रंगमा कि मसीमा रमाउने रहेछ’ भन्दै बनारसको काशी हिन्दु विश्वविद्यालयसम्म पुगेर प्रेमाले चित्रकला प्रशिक्षण लिएकी थिइन् । सास्ती र जी–हजुरी लेख्ने तथा पद र कुर्सीकै लागि आफ्नो लेखन धर्मलाई उपयोग गर्ने जोकोही लेखकलाई ‘क्षणिक’ भन्ठान्थिन्, प्रेमा । उनको
भनाइ हुन्थ्यो, ‘नाराको पर्चा र पोष्टर होइन, साहित्य ।’
प्रेमाले २०२८ र २०३८ सालमा दुईपटक बिहा गरिन् । तर सधैंभर जीवनमा रोजेका बाटा र बेहोरेका भोगाइ ‘व्यावहारिक’ बन्न सक्छन् भन्ने आधार सबैमा मान्य हुँदैन । दुबै विवाह सफल नभएपछि उनले छोरी जललाई हुर्काउन र पढाउन सर्लाही, नेपालगन्ज, वीरगन्जतिर शिक्षिका बनेर केही वर्ष बिताएकी थिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा एमए गरेकी प्रेमाले वीरगन्जको ठाकुरराम र नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा केही समय प्राध्यापन गरेकी थिइन् । एकल महिलाले बेहोरेको संघर्ष र खेप्नुपरेको हैरानीका माझ यही कारण प्रेमाको साहित्यिक ऊर्जा क्रमश: दुर्लभ बन्दै गयो र अमेरिका पुगेपछि त उनी हराएझैं बनिन् । पछिल्ला वर्षमा उनी आफ्ना कविताको संकलन निकाल्ने तयारीमा थिइन्, यसमा छोरी जलले साथ दिइरहेकी बताउने गर्थिन् ।
प्रेमा आफ्नो लेखन, शैली र विषय–वस्तुमा झैं उमेरको रूप–सौन्दर्यमा पनि तिख्खर थिइन् । क्याप्टेन जनकबहादुर राणा (प्रथम नेपाल सुन्दरी रुवि राणाका पिता) ले ‘रचना’ पत्रिकाको एउटा स्मरण लेखमा भनेका थिए, ‘प्रेमा शाह कुनै अज्ञात मूर्तिकारले कँुदेको भिनस–डे–मिलोको प्रतिमाझैं सुन्दर थिइन् । सेनाबाट वार्षिक विदामा वीरगन्ज फर्केका बेला म प्रायश: बिहान क्याम्पस लाग्ने समयमा ठाकुरराम क्याम्पसको गेटनिर पुग्थेंँ, प्रेमाको एक झलक पाउन । तर पछि प्रेमाले एउटा अभूतपूर्व कविता सिर्जना गरेर ठाउँ–ठाउँमा, कवि गोष्ठीमा ताल ठोकेर वाचन गर्न थालेकी थिइन्, ‘आऊ, मलाई सम्भोग गर...†’
यो कविताको कुरा सुनेर म माथिदेखि तलसम्म कामेको थिएँ । लाहुरे भए पनि म कासानोभा (स्त्रीगमनमा हुरुक्क हुने) पुरुष थिइन, न आइलाग्नेलाई जाइलाग्ने किसिमको थिएँ । तर यहाँ कुरा एकदमै फरक भैदिएको थियो । जसप्रति एउटा अति नाजुक धारणा स्थापित गरेको थिएँ, उसैले लाठे जँुगेमुठेहरूको सभामा मुख फोरेर लल्कारेकी थिइन्, ‘आऊ मलाई सम्भोग गर...!’
त्यस दिनपछि बिदामा वीरगन्ज फर्केको बेला, कहिल्यै ठाकुरराम क्याम्पसतिर मुख फर्काएको थिइन ।’
प्रकाशित : पुस ८, २०७४ ०८:५८
आमाको बचतबाट व्यापार
पुस ८, २०७४ दिनेश यादव
काठमाडौँ — क्यानाडेली उद्यमी बनार्ड ‘ब्यारी’ शेरम्यान सानै उमेरमा आफ्नो बुबा गुमाएका थिए । आमाले छोराको पालनपोषण गर्न नसकेर आफ्ना देवर–देवरानीलाई जिम्मा लगाइदिएकी थिइन् । आमाको सानोतिनो जागिर थियो । त्यही जागिरबाट उपलब्ध हुने रकम उनी बचत गर्थिन् । एकदिन त्यही रकम छोराका लागि काम आयो । आमाको बचत रकमबाट शेरम्यानले व्यवसाय खरिद गरेका थिए । बुबा टोरेन्टोमा जिपर बनाउने कम्पनीमा काम गर्थे ।
शेरम्यान ‘जेनेरिक’ औषधि कम्पनी ‘एपोटेक्स’ का अध्यक्ष एवं संस्थापक थिए । १५ डिसेम्बर २०१७ मा आफ्नी पत्नी हनीसँगै मृत अवस्थामा उनी फेला परेका थिए । टोरन्टोस्थित आफ्नै बंगलाको पुल नजिक दम्पतीका शव भेटिएका थिए । मृत्यु शंकास्पद र रहस्यमय भएकाले प्रहरीले गहन अनुसन्धान गरिरहेको छ । अर्बपति दम्पतीको मृत्यु भएको सात दिन भइसक्दा पनि मृत्युको कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन । परोपकारी र समाजसेवीसमेत रहेका उनको श्रद्धाञ्जली सभामा मुलुकका गन्यमान्य व्यक्तिदेखि सयौं सर्वसाधारणको उपस्थिति थियो । ब्यारी र हनी शेरम्यानको छोराले आफ्ना आमाबुबाको मृत्युबारे गरिएको अडकलबाजीले आफू आतंकित भएको प्रतिक्रिया दिएको ‘एबीसी न्युज’ ले जनाएको छ । छोरा जोनाथन शेरम्यानलाई उद्धृत गर्दै उसले लेखेको छ, ‘बिनापुष्टिको समाचार र निराधार अडकलबाजीले हामीलाई थप पीडा महसुस भइरहेको छ ।’ प्रहरीले दुवैको घाँटीमा दबाब देखिए पनि जबर्जस्ती कसैले हत्या गरेको नदेखिएको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख गर्दै अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । ‘द ग्लोब एन्ड मेल’ तथा ‘द टोरन्टो स्टार’ ले प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ‘हत्या–आत्महत्या’ सिद्धान्ततर्फ संकेत गरेको जनाएको छ । तर, शेरम्यानको परिवारले उक्त समाचारको खण्डन गरेको छ ।
सन् १९७४ मा अमेरिकास्थित चर्चित इन्स्टिच्युट ‘एमआईटी’ बाट उनले रकेट विज्ञानमा डक्टरेट गरेका थिए । उनले टोरन्टो विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ र म्यासाच्युसेटस इन्टिच्युट अफ टेक्नोलजी (एमआईटी) बाट अन्तरिक्ष–भौतिक विज्ञान–एस्ट्रोफिजिक्स) मा स्नातकोत्तर गरेका थिए । १६ वर्षकै उमेरमा टोरन्टो विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ विज्ञानमा भर्ना भएका थिए । विश्वविद्यालय तहमा उनको रुचि पढाइमा खुबै भएकाले उनी राम्रो अंकमा उत्तीर्ण भएका थिए । उनले आफ्नो थेथिसका लागि ‘गभर्नर जनरलर्स अवार्ड’ समेत पाएका थिए । शेरम्यान विद्यालयमा पढदा होस् या टोरन्टो विश्वविद्यालयको विद्यार्थी छँदा पनि काकाको ‘इम्पाएर ल्याबोरेटरिज’ मा नियमित काम गर्न जाने गर्थे । बाल्यकालमा शेरम्यान अलिक लजालु र अनौठो स्वभावका थिए । स्कुले जीवनमा उनले राम्रो गर्न नसकेपछि उच्च शिक्षामा आफ्नो प्रदर्शनलाई गजब शैलीमा उजागर गर्न सफल भएका थिए ।
पढाइ सकेपछि उनले काकाको औषधि कम्पनी खरिद गरेका थिए । उनले उक्त कम्पनी काकाकाकीको असामयिक निधन हुनुभन्दा १७ दिनअघि मात्रै खरिद गरेका थिए । उक्त कम्पनीलाई उनी दुईजना कर्मचारीका साथ सुरु गरेका थिए । हाल उनको कम्पनीमा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । कम्पनीले उत्पादन गरेको २ सय ६० प्रकारका औषधिहरू १ सय १५ भन्दा बढी मुलुकमा बिक्री वितरण हुने गर्छ । उनको कम्पनीको औषधि क्यानाडामा मात्रै एक वर्षमा ८९ लाख प्रिस्किप्सनमार्फत बिक्री वितरण हुने गर्छ, जुन सम्भवत: एउटा रेकर्ड नै हो । कम्पनीको वार्षिक ग्लोबल रेभेन्यु (राजस्व) १ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । ‘एपोटेक्स’ ले राम्रा रसायन, पुर्जाबिनै बेच्न सकिने साधारण औषधि र डिस्पोजेबल प्लास्टिक निर्माण गर्छ । सन् २०१४ मा उनी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद छाडे पनि अध्यक्षको भूमिका भने निर्वाह गर्दै आएका थिए । आफ्नै पौरख र परिश्रमबाट यिनी क्यानाडाकै धनाढ्यहरूमा दरिएका थिए । रिपोर्टहरूका अनुसार यिनको कम्पनीले सस्तो मूल्यका औषधिहरूसमेत उत्पादन गर्छ । अमेरिकी अखबार ‘फोब्र्स’ का अनुसार सन् २०१७ मा विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा शेरम्यान ६६० औं र क्यानाडाका १२ औं सर्वाधिक धनाढय बन्न सफल भएका थिए । यसै वर्षको मार्चसम्ममा उनको कुल सम्पत्ति ३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको ‘फोब्र्स’ ले जनाएको छ । एउटा क्यानाडेली बिजनेस पत्रिकाले भने हालै ब्यारी शेरम्यानको कुल सम्पत्ति ३ दशमलव ६५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको छ ।
टोरन्टोको एउटा यहुदी परिवारमा शेरम्यानको जन्म भएको थियो । उनको पालनपोषण काका लोउस विन्टरले गरेका थिए । उनले काकाबाटै व्यापार गर्नसमेत सिकेका थिए । उक्त कम्पनी क्यानाडामै सबैभन्दा ठूलो औषधि उत्पादन गथ्र्यार्े । काका बाहिर जाँदा शेरम्यानले नै कम्पनीको रेखदेख र व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउँथे । काकाको ‘इम्पाएर’ कम्पनीले शेरम्यानलाई प्रशिक्षण र एपोटेक्स कम्पनीको विकास कसरी गर्ने भन्नेबारे जानकारी लिन सहयोग प्रदान गरेको थियो । परिणामस्वरूप कम्पनीले पहिलोपटक होफम्यान–ला रोचेको ‘भ्यालियम (डिआजेपाम) उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको थियो । चार सन्तानका बुबा रहेका उनी आफ्नी पत्नीका साथ परोपकारको काममा समेत सक्रिय रहने गर्थे । दम्पतीले युनाइटेड जेबिस अपिललाई ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । उनले जीवनमा चारवटा कार मात्रै खरिद गरे र त्यसैमा चढेर यात्रा गर्थे । भडकिलो जीवनलाई उनले कहिल्यै महत्त्व दिएनन् । केही वर्षअघि पारिवारिक छुट्टीमा रहेको बेला उनले आफ्नो जीवन र क्यारियरबारे संक्षिप्तमा केही लेख्ने निर्णय गरेका थिए । उनले एउटा सानो पुस्तक नै प्रकाशित पनि गरेका थिए । पछि उनी राजनीतिमा लिबरल पार्टीका प्रमुख आर्थिक सहयोगी बनेका थिए ।
६५ वर्षको उमेरमा उनले प्रोस्टेट क्यान्सरमाथि विजय हासिल गरेका थिए । सफल शल्यक्रियापछि उनी जीवनमा कहिले पनि सेवा निवृत्त नहुने घोषणा गरेका थिए । एक साक्षात्कारमा उनले भनेका थिए, ‘मैले भर्खरै त काम सुरु गरेको छु । म अहिले विद्यालय बाहिरको एकजना विद्यार्थी झैं अवस्थामा छु ।’
केही सञ्चार माध्यमहरूले उनको मृत्यु हुनुभन्दा केही दिनअघि ७५ वर्षीय शेरम्यानलाई एकजना क्रूर लडाकुका रूपमा चित्रण गरेका थिए । उनी कारोबारी प्रतिद्वन्द्वहरूविरुद्ध एकताका सयवटासम्म मुद्दा हाल्न पुगेका थिए । अदालतमा उनका काकाका छोराको एउटा समूहसँग विगत १० वर्षदेखि मुद्दा लडिरहेका थिए । यो पारिवारिक विवादका कारण उनी धेरै निराश थिए । आफ्नो पुस्तकमा यसबारे बेलिविस्तार लगाएका छन् । काकाका छोराहरूले ‘अपोटेक्स’ कम्पनीबाट १ अर्ब अमेरिकी डलर अंश मागेका थिए । यसले उनी केही तनाव रहने गर्थे । आफैंले कमाएको सम्पत्तिमा हक दिनुपर्दा कसलाई पो दु:ख हुँदैन । काम नगर्ने तर सित्तैमा सम्पत्तिमा अंश खोज्नेहरूप्रति उनी निकै आक्रामक हुने गर्थे ।
प्रकाशित : पुस ८, २०७४ ०८:५४